Dowladda oo digniin u dirtay shacabka xoola dhaqatada ah ee ismaamulka Marsabit. – iftiin fm
Dowladda oo digniin u dirtay shacabka xoola dhaqatada ah ee ismaamulka Marsabit.
Dowladda aya soo saartay amar ah in xoola dhaqatada ku dhaqan Marsabit aynan aqal hoori ka dhisi Karin agagaarka waddada weyn ee isku xirta Isiolo iyo Marsabit gaar ahaan inta uu dhaxeysa Tuulooyinka Merille iyo Laisamis Maadama ay burcada ku dhuumaaleystaan aqalahaasi.
Guddomiye kuxugenka amaanka ee deeganka konfurta Marsabit Dickson Mutua aya sheegay in deeganakasi laga soo qabtay laba burcad ah isla markana gacanta lagu soo dhigay hubkii ay haysteen.
Guddomiye kuxugenka amaanka ee deeganka konfurta Marsabit aya sheegay in guddiga amniga iyo sirdoonka ay soo saaren amar ah in xoola dhaqatada uso guuray agaagaarka tuulooyinkasi ay dib uu nooqdan.
Mr Dickson Mutua aya sheegay in Cidii uu hoogaansami weyso amaarkaasi xabsiga loo taxaabi doono isaaga oo intasi ku daray in Xoola dhaqatada looga fadhiyo in ay Aqaladooda deegankasi ka raraan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Go’anka dowladda ayaa imaanaya kadib markii deeganka Moile ay rag hubeysan dhac ugu geysteen gaari nooca xamuulka ah halkasi oo ay lacag iyo alaab kale ka dhacen.
Guddomiye kuxugenka amaanka ee deeganka konfurta Marsabit Dickson Mutua aya sheegay in booliska deeganka Laisamis ay aagasi gaaren isla markana ku raad joogan burcada waxaa uuna dhanka kale shacaabka ku safraya waddadaasi uu xaqiijiyay In amankooda uu sugan yahay.
← DEG DEG: banaanbax rabshadeysan oo ka bilowday Itoobiya.
Dowladda oo loogu baaday in ay taageerto xirfadaha dhalinyarada. →